Cazoo - Maxaan hore u sameyn waayey?
Jawaabtu waa mid aad u fudud, Cazoo ayaa bixiya! nft.cazoo.waxa ay dhalatay bilawgii sanadka 2022 kadib codsi ka yimid isla beeshaas oo si isa soo taraysa ula wareegaysa codsiyada wada shaqaynta...
AkhrisoWaa maxay ururinta cusub ee NFT ee imanaya 2022?
Sidee loo helaa NFT-yada sameeya 100x?
Yaa aan rabin inuu sameeyo x50 ama x100 oo leh maalgelin NFT? Si kastaba ha noqotee, waxay noqotaa mid aad uga dhib badan marka loo eego cryptocurrencies, sababtoo ah waxaa jira dhowr arrimood oo gaar ah ...
AkhrisoNFT: Tilmaamaha Dhameystiran ee Helitaanka 100x Xiga!
Calaamadaha Aan Fungible (NFTs) ayaa adduunka qabsaday. Ilaa aad ku nooshahay mooyee god, halkaasoo wifi aad u xumaanayo, horeyba waad u maqashay arrintan cusub ...
AkhrisoBinance NFT Suuqa: Uruurinta Andy Warhol, Salvador Dalì